Isu - I-Runchen Industry Co., Ltd.
I-Runjin Industry Co, Ltd. ingumhlinzeki wezixazululo ze-Ice-ayisikhilimu oxhaswe yithimba elihle kakhulu lonjiniyela abanolwazi abanolwazi olunolwazi ngeminyaka eminingi embonini ye-ayisikhilimu, kungaba abakhiqizi bemishini ye-ayisikhilimu noma amafektri ka-ayisikhilimu.
IRunjin ihlinzeka kakhulu ngezinsizakalo zefemu ka-ayisikhilimu ezindaweni ezingezansi:
Yenza futhi uthengise imishini yokukhiqiza i-ayisikhilimu ejwayelekile futhi eyenziwe ngezifiso
Inqubo yefektri ka-ayisikhilimu nokuklanywa kokuhleleka, ukuklanywa kwamandla okufakwa kwensiza kanye nokufakwa kobunjiniyela
Ukuphathwa kwefektri, ukuqeqeshwa kanye nomxhumanisi
Isazi nesipiliyoni sokwenza kahle inqubo yokukhiqiza nokunciphisa izindleko zokuguqulwa
Impela lokho okulindeleyo, ukuklama okuhle, izingxenye zekhwalithi kanye nezinto kanye nokuzinza okuthembekile, qinisekisa ukuhlangana kwemfuneko yokukhiqiza ngokuphelele futhi unciphise ukumoshwa komsebenzi.
Siyaqonda ukuthi inqubo efanele yokukhiqiza nokuklanywa kokuhleleka kanye nokuklanywa kwamandla okuhlinzeka ngezinsizakalo zokonga kuqinisekisa ukusebenza kahle kakhulu nezindleko zokuguqula ezinokuncintisana. Hhayi nje lapho kuhlelwa emaphepheni kepha uyakwazi ukusebenzisa ngokoqobo.
Izinsizakalo ezisebenza kahle kusidingo sakho. Siqinisekisa ukuthi imishini yakho isebenza ngesimo esifanele, ngaphezu kwalokho, siyakwazi ukusekela kulondolozo oluhleliwe, ukuthuthukiswa kwemishini kanye nezinsizakalo zezingxenye zokungcebeleka, nokuqhubekela phambili ekubonisaneni nokuphathwa kwefektri, ekuthuthukisweni kwefekthri konke, ekwakhiweni kwenqubo nasekwakheni umthamo wezinsiza nokunye.
Isisekelo sezinsizakalo ezigxile kumakhasimende kanye nezinzuzo zobuchwepheshe, uRunjin uzibophezele kwimishini esezingeni eliphakeme kanye nensizakalo enhle kakhulu nokusekelwa kwezobuchwepheshe. Silangazelela ukukhetha kwakho eRunjin